Imbwa Inotsvoda Manyepo uye Chokwadi: Nei Imbwa Dzinonanzva Chiso Chako Nemakumbo? - Hutano
Imbwa Inotsvoda Manyepo uye Chokwadi: Nei Imbwa Dzinonanzva Chiso Chako Nemakumbo?
Tese isu varidzi vembwa takazvinzwa nguva uye nguva kubva kune avo vasiri varidzi vembwa “unorega imbwa yako ikunanzva? zvakakomba ”.
Vazhinji vedu hatinyari kuzvibvuma; hazvitinetsi nepadiki zvacho. Asi nei imbwa dzichinanzva kumeso kwako? Imbwa dzedu dzinotinanzva sechiratidzo cherudo, sezvazvinowanzofungidzirwa, kana kuti pane zvimwe kwazviri?
Muchinyorwa chino tichaongorora kuti sei imbwa dzichinanzva zvimwe zvikamu zvemuviri wedu (semuenzaniso kumeso, tsoka nemaoko), kunyangwe tichifanira kudzirega, uye nzira dzekumisa kana iwe uine mukuru wako achiuya kuzodya uye slobber chaizvo haifanire kunge iri pane menyu!
Nei Imbwa Yangu Inonanzva Chiso Changu?
Imbwa Kutsvoda - Kududzira Imbwa Yako Imbwa
Unofanirwa Kurega Imbwa Inonanzva Iwe Zvese?
Kana ivo vari kuunganidza ruzivo, sei imbwa yangu ichinanzva tsoka dzangu pandinobuda mushower?
Sei Imbwa yangu ichinanzva tsoka dzangu?
Sei Imbwa yangu ichinanzva maronda angu?
Unofanirwa Kurega Imbwa Kunanzva Kucheka kana Ronda?
Unomisa Sei Imbwa Yako Kubva Kunanzva Tsoka Dzako, Chiso uye Maoko?
Saka Unofanirwa Kurega Imbwa Inonanzva Iwe Here?
Izvo hazvigoneke kuziva zvechokwadi kuti nei imbwa yako ichikunanzva . Hatisi vaverengi vepfungwa, uye imbwa haigone kutaura. Nekudaro, isu tine mamwe mazano akanaka ekuti maitiro aya akasimudzira sei uye nei vachiramba vachikuita.
Kutanga lets kudzokera kumusana wembudzi. Kana iwe ukapedza nguva uchiona mbwanana, iwe uchaona kuti Vanamai vachapedza rakakura rakakura nguva vachinanzva vana vavo.
Izvi hunhu hwamai yakave yakabatanidzwa zvakanaka kune anozochinja maitiro. Muchidimbu, iyo imbwa dzinonanzva kazhinji kana vadiki vakashinga sezvavanokura uye vasinganyatsoita kushushikana.
Zvinotendwa kuti chiito chekunanzva chinoderedza kushungurudzika mahormone mukati memuviri. Kutarisirwa kwakashata kwemadzimai yave ichibatanidzwa nembwa dzinotya mumakore avo anotevera.
Zvinogona kupikiswa kuti imbwa dzinonanzva varidzi vadzo kuti dzideredze kusagadzikana. Munyika isingaratidzike kunge yakarara, ko pooches edu ari kuyedza kutibatsira kuti tinzwe zvirinani?
Tinoziva kuti pamberi pembwa dzavo, mwero wemuridzi oxytocin anowedzera . Oxytocin ndiyo hormone inobatanidzwa mukubatana kwevanhu uye kubatana
Kuti upindure izvi, tarisa kana imbwa yako ichikunanzva zvakanyanya kana iwe uchinzwa kushushikana.
Chimwe chikonzero vanaamai vanonanzva vana vavo ndechekuvashongedza nekuvachengeta vakachena. Mbwanana dzinodzidza maitiro ekuzvishambidza kubva kuna Amai vavo.
Saka, mapeche edu ari kutichengeta takachena?
Kazhinji kana imbwa dzichinanzva tsoka dzedu, isu tinowanzo funga kuti imhaka yekuti tsoka dzedu dzinogona kunge iri chikamu chinopenga chemuviri wedu. Sayenzi, hatisi kure takakanganisa.
Kune zvimwe ziya dikitsi pamakumbo edu , pamasendimita, kupfuura chero kumwe kunhu pane muviri wedu!
Kufanana imbwa padzinofema , kunyanya isu tinodikitira kusunungura kupisa kubva mumiviri yedu. Izvi zvinowanzo kukonzerwa netembiricha inopisa kana kurovedza muviri asi zvinogona zvakare kuita sekushushikana mhinduro - patinenge takamanikidzwa, kurova kwemoyo wedu kunowedzera, kuchigadzira kupisa kwakawanda mukati memuviri.
Nekudaro, isu takadzidzawo kuti kudikitira kunopa chinangwa mukuchengetedza dziviriro yeganda uye kunogona zvakare kuva zvichiratidza zvimwe zvehutano mamiriro senge cystic fibrosis, thyroid issues, chirwere cheshuga uye mamota.
Isu tinowanzo funga nezve dikita sekusanganiswa kwemvura ine munyu, asi ziya ziya rinogadzirwa kunyanya kwemvura , ine ammonia, sodium, potasium, magnesium, chloride, nicotinic acid, creatinine, uric acid, ascorbic acid, thiamine uye riboflavin.
Imbwa hadzidi kubatana nemunyu, asi dzinoita mvura.
Yadzo olfactory system (pfungwa yekunhuwidza) haishamise. Izvi ndizvo zvavanoshandisa kuita nzwisiso yenyika yavo, imbwa, paavhareji, ine Mamiriyoni makumi maviri nemaviri emamiriyoni ekugamuchira nepo vanhu vangori nemamirioni mashanu.
Ivo vanokwanisa kunhuwidza mamorekuru ese anowanikwa mune ziya redu. Saka zvirizvo, pavanonanzva tsoka dzedu vari kuunganidza huwandu hunoshamisa hweruzivo pamusoro pedu sembwa dzinotinanzva se hunhu hwekuongorora .
Izvi ndizvo zvinowanzoitirwa imbwa tichaona kuti tiri kurwara tisati taziva kuti tiri.
Sezvatakambotaura, imbwa dzine hukama hwemvura. Saka chaizvo, pavanonanzva makumbo ako kana tsoka paunenge uchangobva kubuda mushower - zvinogona kungova nekuti une mvura paganda rako.
Saka isu tavimbisa kuti imbwa dzinonanzva vanhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Ivo vanogona kunge vari kuedza kutinyaradza isu - nekudzora kushushikana kwedu mazinga
Vanogona kunge vari kuunganidza ruzivo nezvedu
Ivo vanogona pachokwadi kungotinanzva nekuti isu tine mvura paganda redu
Chimwe chikonzero chisiri chekuda, ndechekuti imbwa dzinonanzva kumeso kwako nekuda kwekuti une zvimedu kana hwema hwechikafu ipapo
Sezvatakataura, imbwa sisitimu inonamira inovaita kuti vanzwisise kune huwandu hwehwehwe. Kunyangwe iwe ukapukuta muromo wako mushure mekudya, kune ziso rakashama hapana chakasara, kune imbwa, ivo vacharamba vachinhuwirira kuti Philly chizi steak yawanga uine masikati.
Dzimwe mhando dzembwa vane akawanda hwema receptors kupfuura vamwe
# Yehwema Receptors
Dachshund 125 Miriyoni
Fox Terrier 147 Mamirioni
Beagle 225 Mamirioni
Mufudzi wechiGerman Imbwa 225 Mamirioni
Bloodhound Mamirioni mazana matatu
Saka iwe unogona kuona kuti kana imbwa yako iri imwe yemhando dziri pamusoro, vanogona kunanzva kumeso kwako zvakanyanya nekuda kwekuti ivo vane hanya zvakanyanya nezvose izvo chikafu chawaifunga kuti wabvisa.
Saka imbwa dzinotinanzva nekuti dzinokwezvwa nezvimedu zvekudya nemvura - kwete kudanana zvakadaro. Isu zvakare tine imwe tsananguro iyo inokanda iyo yese rudo pfungwa kunze kwehwindo.
Imbwa inotinanzva nekuti isu takavadzidzisa.
Saka iwe mazhinji haurangariri uchishingairira kudzidzisa imbwa yako kunanzva iwe, asi funga nezvayo; unoita sei kana imbwa yako ikunanzva? Vazhinji vedu tinoseka, kunyemwerera, kuvabata kana kuzvibata navo pane imwe nhanho. Isu tinoziva iyo imbwa inodzidza kuburikidza inoshanda mamiriro .
Kana chiito chikakonzera mhinduro yakanaka kana kusimbisa zvinowanzoitika kuti zvidzokororwe .
Saka, kana pooch yedu painotinanzva uye isu tichiseka, kunyemwerera kana kupa imwe inofadza jovial mhinduro; vanozvitora semhinduro yakanaka (zvinova) uye vanodzokorora hunhu. Imbwa dzedu dzinogona kunge dzichitinanzva nekuti dzinofunga kuti ndizvo zvatiri kuda kuti dziite.
Izvi zvinotsanangurawo kuti sei imbwa dzinowanzo kutsvoda vamwe vanhu kwete vamwe. Kana mumwe munhu akapindura nenzira yakanaka, iyo imbwa inowanzo kudzokorora maitiro. Kana vakatsvoda mumwe munhu uye ivo vakapindura nenzira isina kunaka - hazviite kuti imbwa iri kuzozviita zvakare.
Chero varidzi vembwa vanokuudza, kana wakazvifudza kana kuzvicheka, imbwa yako ichatanga kunanzva ronda. Vanhu vazhinji vanogona kubviswa, asi pane chaiko zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuti izvi zvinobatsira kuporesa.
Mumwe muongorori muYunivhesiti yeAmsterdam akawana kuti zviripo kukura zvinhu uye histatins mune mate ayo anobatsira kuvhara ronda. Histatins antimicrobial uye antifungal, nekudaro ichideredza mukana wehutachiona.
Iwe unogona saka kupokana kuti kana imbwa dzichinanzva maronda ari iwo chaiwo mushonga unorwisa utachiona . Vanobvisawo chero marara kubva kumaronda nerurimi rwavo, zvakare vachideredza mukana wehutachiona.
Mumashoko ekushanduka-shanduka, izvi zvinonzwisisika. Ndidzo imbwa dzese dzinenge dzave - vangadai vasina mukana wekutanga wekubatsira kit musango! Iyi nzira yakapusa ingadai yakavachengeta vari vapenyu.
Kunyangwe iri pfungwa yekudziya yekuti imbwa dzinogona kubatsira kuporesa maronda, zvinofanirwa kuyeukwa kuti a plethora yebhakitiriya yakawanikwa zvakare mumatete akatendeka aFido.
Mimwe yebhakitiriya iyi zoonotic, zvichireva kuti inogona kupfuudza chirwere kubva kumhuka ichienda kumunhu. Hutachiona hunowanikwa mumate canine hwave hwakabatana ne septicemia, izvo zvisina kunaka kana uri kubvumira pooch yako kunanzva ronda rako.
Vazhinji varidzi vembwa havasi kuda kumisa imbwa yavo kubva pakuinanzva - asi zvakafanira kuratidza kuti kune huwandu hwakawanda hwehutachiona hunowanikwa mumiromo yembwa.
Chidzidzo chakaitwa chakawana anotevera mabhakitiriya mumuromo wembwa:
Proteobacteria - izvi zvinosanganisira inozivikanwa salmonella uye helicobacter pathogens . Vazhinji vanhu vanoziva zvakajairwa Salmonella chepfu zviratidzo: manyoka, fivha, mudumbu kurwadza, uye kurutsa. Vamwe vanhu vanogona kuva neherikoputa bhakitiriya munzira yavo yekudya uye vasingacherechedze chero zviratidzo zvemakore akati wandei.
Actinobacteria - izvi zvinosanganisira maStreptomyces ayo anonyatso shandiswa kugadzira mishonga inorwisa mabhakitiriya uye mishonga yekuuraya zvipfukuto.
Bacteroidetes - aya utachiona anowanikwa muzvirwere zvakawanda zveanaerobic uye ave achizivikanwa semishonga inorwisa mabhakitiriya.
Firmicute - izvi zvinosanganisira iwo madiki makirasi Clostridia naBacilli. Bacilli inosanganisira huwandu hwehutachiona hwehutachiona.
Fusobacteria - aya mabhakitiriya ave achizivikanwa nekukonzera chirwere chenguva, Lemierre's Syndrome uye maronda eganda.
Muchidimbu, nekurega imbwa yako ichikunanzva, vanogona kupfuudza hutachiona hunogona kukurwarisa.
Sezvatakambotaura, imbwa dzinodzidza kuburikidza neanoshanda mamiriro; zvinova zvinobatsira pakuvadzidzisa . Tinogona kushandisa izvi kutibatsira kana isu tichiedza kudzidzisa imbwa yedu kumisa hunhu husingadiwe.
Kana imbwa yako ikatanga kunanzva tsoka dzako, usava nehanya nayo. Sezvatakakurudzira pamusoro apa, mhinduro inofadza ingadai isina kudzidzisa pooch yedu kuzviita.
Kana kufuratira kusingashande edza pazasi:
Bvisa mukana - chengetedza tsoka dzako munzira
Kana akaramba achidaro - muvhiringidze nekukanda zvinoitwa pasi kure nepane tsoka dzako kana kumupa tsenga.
Chinhu chakakosha iye anodzidza kuti kunanzva hakugamuchire mhinduro - iye zvino kashoma kuzviita.
Rangarira kudzivisa kushandiswa kwechirango - tinoziva kuti nzira dzekudzora dzinogona kuumba hunhu hunetswa imbwa dzinokonzerwa nekutya uye kunetseka.
Iko hakuna kuramba kuti kune njodzi yekuti imbwa yako ichipfuudza hutachiona hwehutachiona kwauri kana ukamurega achikutsvoda (kunanzva) iwe.
Nekudaro, isu takamisa zvakare kuti kune zvinobatsira zvinhu mune canine mate iyo inogona kuita seantimicrobial uye antifungal.
Mate zvakare ane zvinhu zvekukura izvo zvinogona kutsigira kuvhara-ronda .
Kubva pamazuva avo ekutanga, vana vadiki vakadzidza kuti amai vavo vachivananzva vakavaita kuti vadzikame uye vadzikise huwandu hwehomoni dzekunetseka. Tinogona kupokana kuti kana imbwa dzichitinanzva, dziri kuedzawo kudzikisa kushushikana kwedu.
Ini ndinofungidzira iwe ungati ma juri aripo kuti imbwa kutsvoda kuri kwakanaka here kana kuti kwakaipa kwauri. Nekudaro, kana iwe ukafunga kuti hauchadi imbwa yako kunanzva iwe isu tine mashoma anobatsira anonongedzera pamusoro.
Saka pamwe imbwa hadzititsvode sezvataifunga.
Kunyangwe isu tichigona kupokana kuti imbwa dzinotinanzva kuti dzideredze kushushikana kwedu, sezvakaitwa naAmai vavo kwavari, zvinowanzoitika kuti isu tisingazive takadzidzisa maputi edu kuti tinoafarira pavanotitsvoda, saka vanoramba vachidaro.
Imbwa dzinozonanzva kumeso kwako, kazhinji nekuti uine zvimedu zvekudya zvasara - zvisingaonekwe kune ziso rakashama, asi mhuno yavo inoshamisa ichavaburitsa.
Unogona kunzwa irwo rurimi rwakashoshoma sekubuda kwaunoita mushower - kazhinji nekuda kwekuti une mvura paganda rako uye imbwa semvura.
Hapana imbwa dzinoramba dzichakunanzva kuti uwane ruzivo , saka ndosaka vachida kunanzva nhengo dzinodikitira kwazvo dzemuviri wako; maoko netsoka. Iri ruzivo rwakadai runowanzo kuvazivisa nezvehutano hwedu husina kunaka kunyangwe tisati taziva chero chinhu nezvazvo.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti mate anogona kubatsira pakurapa kwemaronda uye anogona kuita senge antiseptic.
Asi zviri pachena zvakare kuti kune akawanda marudzi ehutachiona hwehutachiona mumate izvo zvinogona kukonzera hutachiona muvanhu. Saka iwe ucharamba uchirega yako pooch kukutsvoda?
Ko maBlack Labs anoita vavhimi vakanakisa here?
Zuchon imbwa yakanaka here kuti mhuri dzive nayo?
hafu poodle half shih tzu
dema negoridhe mufudzi wechiGerman
yorkshire terrier-shih tzu musanganiswa